F-6018T Imibhobho Laser ukusika Machine - China Dongguan Glorystar Laser
Kuba Iimpawu nemilo ityhubhu ukusika Product ezahlukeneyo ● Ithunyelwe ngqo eliphezulu transmission ibhola esijijwayo, yomgama isikhokelo-kaloliwe ● inkqubo servo motor uqhuba ngqo phezulu kwenye, amazwe gearbox helical. ● Yahlula tube ukusika isixhobo ● Fast ukusika speed, kahle eliphezulu, ekhuselekileyo, yokusebenza ezinzileyo kushishino osebenzayo Luphawu kusetyenziswa kuzo zonke iintlobo amashishini iimveliso zesinyithi ezifana umbhobho processing isinyithi, cookware kunye sixhobo lokuhlambela, izibhengezo & imiqondiso, ukukhanyisa & yentsimbi, cabi yombane. ..
Kuba Different ukusika yoBume tube
● Ithunyelwe ngobuciko eliphezulu transmission ibhola esijijwayo, ngendlela eliphezulu yomgama guide-kaloliwe
● Ithunyelwe inkqubo yokuqhuba motor servo, amazwe gearbox helical.
● Yahlula device tube ukusika
● isantya ukusika Fast, kahle eliphezulu, ekhuselekileyo, yokusebenza ezinzileyo
Luphawu kusetyenziswa kuzo zonke iintlobo amashishini iimveliso zesinyithi ezifana umbhobho processing isinyithi, cookware kunye sixhobo lokuhlambela, izibhengezo & imiqondiso, ukukhanyisa & yentsimbi, nekhabhathi zombane, izahlulo auto, oomatshini kunye nezixhobo zokusebenza, izixhobo nendlu, elavator kunye ngqo iindawo processing, njalo njalo .
Ikakhulu kuzo zonke iintlobo zezixhobo kwiphepha metal non-contact ukusika fast, nokukrola. kunye nokunye Ukuhlukunyezwa, ezifana yesinyithi esiphakathi, intsimbi engatyiwa, ingxubevange, intsimbi manganese, iqaqanjiswa, i-aluminiyamu, ubhedu nentsimbi umbhobho processing, etc
power seyiyonke <20KW
indlela yokudlulisa Ball Screw Transmission
ombane Working 380V 50Hz (60Hz)
Previous: GS-3015G / GS-4020G Fibre Laser Cutting umatshini netyhubhu ahlabayo
Okulandelayo: Station Double Laser Welding Machine
2 Heads Laser mgawuli Machine
Intengiso Laser Cutting Machine
ilaphu Machines Cutting
Glass Tube Laser mgawuli Machine
Laser Machines Cutting
Laser kamatshini Pipe
Pipe Ludityanisiwe Cutting Machine